I-Testosterone Propionate powder (57-85-2) hplc =98% | AASraw steroid
/ iimveliso / Anabolics Steroids / Series Testosterone powder Series / Testosterone Propionate powder
SKU: 57-85-2. iindidi: Series Testosterone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Testosterone Propionate powder (57-85-2), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Testosterone Propionate powder ividiyo
I-testosterone propionate ipowder powder ezisemqoka
igama: testosterone propionate powder
Isisindo somzimba: 344.4877
Ukusetyenziswa kompompo we-testosterone propionate kumjikelezo we-steroids
Amagqabi amaPowder Names
Igama le-brand ye-testosterone propionate (i-CAS 57-85-2) igama elibandakanya "Testovis" nelithi "Virormone", libizwa ngokuba yi-Test P, Testo P, i-propionate.
i-testosterone propionate powder yiyona mfutshane-testosterone steroid. Ingxube ye-injection nezinga elincinci lokukhululwa ngaphandle kwe-Testosterone engaqinisekisiwe, kodwa isantya esiphuthumayo sokukhululwa kunabo bonke abanye abahloli be-testosterones. Iyona nto inzima kukuba abasebenzisi kufuneka bajobe i-testosterone propionate powder ubuncinci yonke imihla ngemihla kulo mjikelezo ukuze bafumane iziphumo ezifanelekileyo. Noko ke, iingenelo zilula ukulawula nokukhusela iziphumo ezibi. Kwakhona kuba kukho i-ester encinci nge-vial, kukho i-testosterone yangempela ngomjovo, ovelisa iziphumo ezingcono. I-espionate ester yandisa i-half-life Testosterone malunga ne-4 neentsuku zesiqingatha.
Usetyenziso lwe-testosterone propionate
I-testosterone propionate powder iya kusetyenziswa ngokuqhelekileyo i-25-30mg nganye yeejokelelo kunye ne2-3 ngamaxesha ngeveki. Ukulungiselela abadlali abaphucula ukusebenza, baya kusebenzisa i-100mg yonke imihla. Le yimizi ekhuselekile, kulula ukulawula kwaye kufuneka ibekezeleke kakuhle ngabantu abaninzi abadala.
Kukuphi ukufaka inkunkuma ye testosterone propionate (CAS 57-85-2)
I-testosterone propionate powder kuphela nje nguTesttosterone kunye ne-Propionate ester eyayibophe i-chemical structure. 'Ipropionate' yiPropionic acid, kodwa emva kokubophelwa kwiTesttosterone iyaziwa njengesibophelelo se-ester (okanye ukuxhunyaniswa kwe-ester). I-propinoic acid ixhomekeke kwiqela le-17-beta hydroxyl kwisakhiwo seT Testosterone. I-anabolic steroids eqinisekisiwe iyanqumla amanqatha amaninzi, kwaye ikhulule ngokukhawuleza kwi-injection site. Isizathu esona sizathu sokwandiswa kwesigamu sengqondo kunye nokukhululwa komyinge kuba kuba i-testosterone propionate powder ingena egazini, i-enzymes isebenza ukuphula umxho phakathi kwe-ester kunye ne testosterone, ezithatha ixesha elinganayo-kuxhomekeke kwisiphi ester esetyenziswayo. Ekugqibeleni i-enzyme isusa i-ester, kwaye yintoni eseleyo yi-Testosterone ecocekileyo ekhululekile ukwenza umsebenzi wayo emzimbeni. I-Testosterone yodwa engenawo u-ester axhonyiwe kuyo ine-half-life of approximately 2 kwiiyure ze-4. Xa i-ester propionate ixhomekeke kuyo, isiqingatha sobomi seTesttosterone sifinyelela malunga ne-4 neentsuku ezisiqingatha.
I-Testosterone igqugquzela ukugcinwa kwe-nitrogen kwisisipha - ngakumbi i-nitrojeni isistim sinalo iprotheni engaphezulu, ingaba inkulu iyakwazi ukuyigcina. I-Testosterone iyakwandisa amanqanaba e-IGF-1 emzimbeni. Inxaxheba ephambili ye-IGF-1 kukulungelelanisa ukukhula kunye nesifo semetabolism. I-IGF-Ndixhomeke kakhulu kwi-hormone yokukhula ukuxhasa umsebenzi wokukhuthaza ukukhula.
Isilumkiso kwi Testo p powder
Amadoda amaninzi aya kuba nokusebenzisa i-200mg zonke ezinye iintsuku ngokukhululeka. Kodwa kufuneka uhlale ukhumbule ukuba i-dose ephakamileyo iphakame kakhulu amathuba okusebenza. Izilingo eziphezulu ziza kufuna ulumkiso olungakumbi kunye nemizamo ekulawuleni iziphumo zecala kodwa kungaphezu kokukwazi ukuzilawula.
Testo p powder Imiyalelo eyongezelelweyo
I-testosterone propionate powder ifumaneka ngokubanzi kumashishini abamnyama, phantse wonke umthengisi omkhulu we-steroid uyithwale. Ukuba ufuna ukuthenga i-testosterone propionate powder (CAS 57-85-2) kwi-intanethi, uya kufumana oku kube lula kakhulu. Xa ugqiba ukuthenga i-testosterone propionate powder online, kubalulekile ukuphanda umphakeli wakho kunye nomnxeba ngaphambi kokuthenga.
Iimpembelelo ze-testosterone propionate powder (ezinqwenelekayo)
Yenza unyango lwe-Testosterone
Ukulandela ukuphela kwanoma yimuphi umjikelo, iprogram yePost Cycle Therapy (PCT) efanelekileyo kwaye ifanelekileyo ihlala ifunekayo, apho i-Testosterone-evuselela izixhobo ezinxulumene ne-Nolvadex kunye / okanye i-HCG kufuneka isetyenziswe ukuze kuququzelelwe ukulungelelaniswa kwe-HPTA kunye ne-Testosterone engapheliyo imveliso ngokukhawuleza. Iiprotokholi ze-PCT kunye neenkqubo zivame ukuqhutyelwa ixesha le-4 kwiiveki ze-6 emva kokuba zonke i-anabolic steroids zikhutshwe emzimbeni emva kokuphela komjikelo. Ukungaphumeleli ukubandakanya kwinkqubo efanelekileyo ye-PCT kunokubangela umonakalo ongunaphakade kwi-HPTA, apho umntu akhiqiza amanqanaba angenayo / alambileyo e-Testosterone (imeko yonyango ebizwa ngokuba yi-hypogonadism), kunye neyeza unyango ngohlobo lwe-TRT (iTytosterone Replacement Therapy). ubomi kuya kufuneka.
I-testosterone propionate Powder (CAS 57-85-2)
I-testosterone propionate powder- 4-ANDROSTEN-17b-OL-3-ONE 17-PROPIONATE
I-melting point = 247-252 F / 118-120 ℃
isisindo somzimba = 344.50
Indlela yokuthenga i-testosterone propionate powder (i-CAS 57-85-2) esuka kwi-AASraw
I-AASraw inikezela ubumsulwa 99% Testosterone Propionate powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iibhanki zangaphantsi zokusetyenziswa kwe-injection.
I-testosterone propionate powder Ukupheka: